यदि कुखुराको खोप खाईको निदान गरिन्छ भने तीव्र संक्रामक रोग हो, त्यसपछि उपचार तत्काल आवश्यक हुन्छ। खाडीको गम्भीर हमलाहरूको कारण, स्पेसोडिक हो, बच्चाको स्वास्थ्य र जीवन खतरनाक छ। बच्चाहरू एक वर्ष भन्दा कम उमेरका लागि अत्यन्त खतरनाक छ।
बच्चाहरु र बच्चाहरु जो बच्चाहरु संग जटिलताहरु लाई केवल एक अस्पताल को सेटिंग मा उपचार को रूप मा गुजरना चाहिए। अन्य परिस्थितिहरुमा बच्चाहरु र घरमा घरको मासु खाईको उपचार सम्भव छ। एक मुख्य अवस्था बच्चाहरु यस्तो वातावरण संग प्रदान गर्न को लागी छ कि सबै उत्तेजनाहरु स्पास्पोडिक खांसी को उत्तेजित गर्न मा सक्षम अनुपस्थित हो। यसमा न केवल धूल कणहरू, ऊन र पराग, तर पनि आवाजहरू, अचानक आंदोलनहरूले बच्चामा डर लाग्न सक्छ। रिकभरी अवस्थाको लागि कोठा वायुलाई पनि आवश्यक छ।
क्याप खाईको प्रारम्भिक चरण एंटीबायोटिक्स लिने कारण हो। बच्चाहरु मा क्युपिंग खांसी मा एंटीबायोटिक्स एजेन्ट-ट्रांसजनहरु को विकास को रोक्न सक्छ। तथापि, तिनीहरू प्रभावकारी छन् कि स्पेसोडिक खाडीको चरण अझैसम्म आएको छैन भने, यो रोगको दोस्रो चरणमा एन्टिबायोटिक्ससँग बच्चाहरु मा पेरटुसिस को उपचार अपरिहार्य छ।
Pertussis छड़ी azithromycin र erythromycin को संवेदनशीलता द्वारा विशेषता हो, त्यसैले बच्चाहरु मा whooping खांसी को लागि यी ड्रग्स प्राय: प्रायः। यसको अतिरिक्त, उपचार को पुनरुत्थान विरोधी antiicergic ड्रग्स ( Tavegil , zodak , dimedrol, क्याल्सियम, आदि) हुन सक्छ। यदि बच्चाको कलेज धेरै मोटो छ भने, यो प्रोटोलोटिक एंजाइमहरूसँग इन्सुलेशनको लागि प्रयोग गरिन्छ। तर यो विधि केवल तीन वर्ष भन्दा माथि साना रोगीहरूको लागि स्वीकार्य छ। जे पनि यो थियो, बच्चाहरुमा प्रतिटन को डक्टर को पर्यवेक्षक द्वारा राम्रो तरिकाले व्यवहार गर्दछ!
परम्परागत औषधिले कसरी बच्चाहरु मा पेटीसिस को उपचार गर्न को लागी धेरै तरिकाहरु लाई प्रस्ताव गर्न सक्छ, तर उनि संग व्यवहार गरिनु पर्छ तीन साता सावधानी। पूर्वस्कूल बच्चाहरु को लागि यस प्रकारको उपचार को प्रयोग अस्वीकार्य छैन।
त्यसोभए, बच्चाहरु मा क्युपिंग खाडी को लोकप्रिय उपचार को नुस्खा:
सूक्ष्म कटा प्याजको आधा-लिटर जार4चम्मच चम्मचको साथमा छ। एक चम्मचको पेयको लागि बनाइएको सिरप दिन तीन पटक।
एक गिलासको ताजा दूधमा पाँचवटा कपडा लसुन लोभहरू खसाल्नुहोस्। दिन दुई चोटि भाइरस लिनुहोस्।
बच्चाको घाँटीमा झुन्ड्याइएको माठबलहरूको भित्तामा बाँधिएको जुत्ता पाउनुको साथ एक फीता।
बच्चा मा नाक देखि रक्त - हेरविचारका कारण र नियमहरू सबै आमाबाबुले थाहा पाउनु पर्छ
मैले मेरो दाँत ब्रश गर्न थालेँ?
बच्चाहरु मा गुलाबी लिचिन - उपचार
बच्चाको जुत्ता हल्लाउँदैछ
बच्चाहरु मा लक्षण ग्रीफ
बच्चाहरु को लागि immunomodulators
बच्चाहरु मा एलर्जी rhinitis
बच्चा किन सपनामा पसीने?
के म मेरो बच्चालाई तापमानमा फाल्न सक्छु?
बच्चामा खाँदै, बच्चाहरु मा सुखा र गीला खाँटीको उपचार।
बच्चाले आफ्नो नाकलाई खरानी समाधानको साथ कसरी प्रयोग गर्न सक्छ?
गधा लोचदार कसरी गर्ने?
अंग्रेजी आहार: मेनु
चिनियाँ चिकित्सा टाम्पोन
जीवनमा कसरी लक्ष्य पाउन सकिन्छ?
ओवनमा क्रिसपे क्रस्ट संग पंखहरू - स्वादिष्ट डिश खाना पकाउने मूल विचारहरू
चिडियाघर - पीना
चावल आहार वजन घटानेको लागि
बाहिरी धातु कपडा हेंजर
वसन्तको बिरुवामा रास्पबेरी रोपण गर्दै शुरुका नियमहरू जान्न आवश्यक महत्त्वपूर्ण नियमहरू हुन्
बेडरूम फर्नीचर एक आधुनिक शैली मा
रातो अन्तर्राष्ट्रिय दिवस
फर्शमा टाइल कसरी राख्नुहुन्छ?
"Breadboys राम्रो भयो" - राम्रो र खराब